Bombardier CRJ-200 ပြင်သစ်လေကြောင်း FS2004 DOWNLOAD - Rikoooo
အရွယ် 8.23 ကို MB
downloads ရယူရန္ 22 322
Author: ProjectOpen က Sky, suite ကို fichier readme
ဒီနေရာမှာမကြာခဏဒေသဆိုင်ရာပျံသန်းမှုများအတွက်ပြင်သစ်လေကြောင်းကအသုံးပြုတဲ့ဂျက်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမော်ဒယ်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံထူးခြားသောဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့မရှိသလောက် add-on တစ်ခုထိုကဲ့သို့သောအရည်အသွေးမြင်ကြပြီ။ သငျသညျစိတျပကျြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ functional panel ကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးအသံ။
အဆိုပါ CRJ200 နှစ်ခု turbojets General Electric CF34-3B1 takeoff မှာ 8729 lbf (38.83 KN) ၏တစ်ဦးအမည်ခံတွန်းကန်အားထုတ်လုပ်စွမ်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ 464 တစ် Cruise မြန်နှုန်းမှာ (860 km / h) အထိ knots, က 1,915 ခရီးသည်တစ်ဦးအပြည့်အဝဝန်နှင့်အတူ 3,547 မိုင် (50 ကီလိုမီတာ) ပျံသန်းနိုင်သည်။
အဆိုပါ CRJ200 87 ခြေရင်း 10 လက်မ (26.77 မီတာ) ရှည်လျား 53,000 ပေါင် (24,041 ကီလိုဂရမ်) ၎င်း၏အမြင့်ဆုံး takeoff အလေးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ 180 ဒီဂရီ၎င်း၏လှည့်အချင်းဝက်မြေပြင်ပေါ်မှာသာ 75 ပေ (22.9 မီတာ), ပို. ပို. အလုပ်များအရေးပါသောလေဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Bombardier လေကြောင်းလက်ရှိတွင် CRJ200 နှစ်ယောက်ဗားရှင်းပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ CRJ200 CRJ200 ER နဲ့ LR ။ တိုးချဲ့အကွာအဝေး (ER) နှင့်အတူအဆိုပါဗားရှင်း 51,000 ပေါင်အများဆုံး takeoff အလေးချိန် (23,133 ကီလိုဂရမ်) နှင့် 3547 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အကွာအဝေးဖြတ်သန်းဗားရှင်း (LR) 53,000 ပေါင်အများဆုံး takeoff အလေးချိန် (24,041 ကီလိုဂရမ်) နှင့်2880 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးပြသ
အင်ဂျင်တစ်ခုချင်းစီ version ကိုအရှင် payload ထို့ကြောင့်အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်, အမြင့်မှာလေဆိပ်မှာလေယာဉ်ပူတဲ့ရာသီဥတုမှာခြွင်းချက်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစေခြင်းငှါပြုပြင်နိုင်ပါသည်။ (ဝီကီပီးဒီးယား)